Faallooyinka laga baxinayo is casilaada Kinberg Batra - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Hoggaamiyaasha xisbahaysiga alliansen. sawir: Vilhelm Stokstad/TT
Hoggaamiyaasha isbahaysiga oo k hadlay
La daabacay fredag 25 augusti 2017 kl 11.38
Tan iyo markii subaxnimadii jimcaha ay Anna Kindberg Batra shaacisay inay iska casilayso hoggaaminta xisbiga Moderaterna, waxaa iska soo daba dhacaya fallooyin arrinkaa la xiriira.
Anders Ågren, guddoomiyaha laanta Moderaterna ee gobolka Västerbotten kana mid ahaa laamihii dalbanayey is casilaada Kinberg Batra ayaa soo dhaweeyey go’aanka ay qaadatay.
”Waxay aheyd jawaabtii la sugayey marka la fiiriyo arrinta sida ay ku socotay, waxaanan qabaa in ay tahay midda keliya ee saxda ah” ayuu yiri.
Dhanka kale Anders Åhlin oo ka tirsan Moderaterka Örebrå ayay dareenkiisa taabatay is casilaadda Kinberg Batra.
Anna waa is naqaan, dabcan dareen ayay igu reebtay laakiin Anna waxa ay qaadatay masuuliyad culus iyo go’aan adag, ayuu yiri.
Waxaa uu raaciyey in Kinberg Batra fahantay waxa arrintu ku saabsan tahay balse ay wax badan oo wax qabasho ah ugu dhiman yahiin Moderaterna iyo in ay qabato xil sare. Asagoo ku amaanay go’aanka ay qaadatay:
”Tan waxa ay muujineysaa muga ay Anna Kinberg Batra ku dhex leedahay Moderaterna, iyo inay ka mid tahay siyaasiinta ugu xariifsan xisbigeena, ayuu yiri.
Hoggaamiyeyaasha garabka Alliansen
Dhanka kale aaldaha bulshada ayey soo dhigeen qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha xisbiyada isbahaysiga Alliansen.
Hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna Jan Björklund ayaa ku qoray aaladda Twitter:
"Waan ka xumahay falka ah in Anna Kinberg Batra ay ku khasbanaatay inay jagada iska casisho. Xushmad ballaaran ayaan u hayaa, muddadii saddexda sannadood ee wada-shaqeeyntu naga dhexeeysay. Mahadsanid Anna!"
Halka hoggaamiyaha xisbiga Center-ka Annie Lööf ku qortay sawir ey ku wada jiraan Anna Kinberg Batra oo ay soo dhigtay barta Twitter:
"Xaqiiqdii aad ayaan uga heli jiray wada-shaqeeyntii naga dhexeeysay Anna, iyo inaan bartay shakhsi aad u dabeecad wanaag-san. Anna waa hoggaamiye doonisteedu ballaaran tahay, howl kar ah, kuna adadag goolkeeda. Guul ayaan u rajeeynayaa mustaqbalka iyo inuu xisbiga Moderaterna helo xasilooni uu halgan kula galo garabka Alliansen doorashada soo socota iyada".
Hoggaamiyaha xisbiga Kristdemokraterna Ebba Busch Thor ayaa ku qortay khaanadeeda Instagram: "Anna waxay ii noqotay saaxiib aan jeclahay iyo qof aan ku ixtiraamo wada-shaqeeynta. Waa qof leh shakhsiyad wanaag-san iyo siyaasi quman. Awood ballaaran ayay u leedahay hoowlaha sidii ey jiilasha soo socda ku heli lahaayeen tacliin wanaag-san iyo suurtagallo wanaag-san oo ey lugahooda ugu istaagaan... Waan ka xumahay in aan wada-shaqeeynta siyaasadda ku lumiyo Anna, hase yeeshee waxaan ixtiraamayaa go’aanka ay ku gaadhay inay jagada iska casisho".